Published June 4, 2020 at 3:06 PM CDT
Senator-ka gobolka Randy Feenstra wuxuu xukumay Primary Republican-ka. Wuxuu garaacay sagaal-jeer Steve King oo ku dhawaad 10-dhibcood leh taageerada 45%.
Feenstra wuxuu hadda wajahayaa Democrat J.D. Scholten. Scholten wuxuu ku dhawaad garaacay King tartankii 4-aad ee ugu dambeeyay ee Golaha Deegaanka ee sanadka 2018.
Dimuqraadiyiinta Iowa waxay doorteen Des Moines fulinta maamulka guryaha Theresa Greenfield si ay ugu magacowdo Guurtida Mareykanka si ay ula wareegaan Senator Joni Ernst bisha November.
Tartankii loogu talo galay Woodbury County Sheriff, sarkaalkii hore ee booliiska Sioux City Chad Sheehan ayaa helay aqlabiyadda codbixinta xisbiga jamhuuriga. Xilligan, ma jiro qof u tartamaya Dimuqraadi.
Sheehan wuxuu leeyahay waa qofka mideyn kara bulshada isla markaana saameyn wanaagsan ku leh caawinta dadka dareemaya inay si xun ula dhaqmayaan sharci fulinta.
Siouxland Health Health waxay soo sheegaysaa hal dhimasho oo dheeraad ah oo ay ugu wacan tahay cudurka coronavirus ee Gobolka Woodbury iyo laba xaaladood oo dheeri ah. Waxaa dib u dhac ku yimid helitaanka natiijooyinka baaritaanka shaybaadhka xaruntiisu tahay Dallas.
Taasi waa sababta oo ah Lab Corp wuxuu saameyn ku yeelanayaa shaqaalaynta sababo la xiriira mudaaharaadyo ku saabsan geerida George Floyd.
Dhanka kale, saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ayaa sheegaya inay wali arkin saameyn yar oo ku saabsan luminta goobta Iowa site oo ku taal Sioux City. Inta badan tijaabooyinka waxaa sameeya bixiyeyaasha caafimaadka ee maxalliga ah iyo goobaha baaritaanka bulshada bedelkeeda. Saddex toddobaad gudahood, Imtixaanka Iowa wuxuu wax ka yar 800 tijaabooyin ka sameeyay Magaalada Sioux City.
Waxaa jiray ku dhawaad 2,800 xaaladood oo togan Gobolka Woodbury iyo 37 dhimasho ah. Saraakiisha Caafimaadka ee Dakota County ayaa diiwaangeliyay lix kiis oo cusub oo ah ugu yaraan 1,700 xaaladood iyo 26 dhimasho ah.
Iyo, Iskuullada Magaalada South Sioux ee Iskuullada Magaalada waxay ardayda u qorayaan sanad dugsiyeedka cusub. Haddii aad xiisaynayso waxaad ku joojin kartaa Xarunta Soo-dhaweynta laga bilaabo 8 a.m. illaa 3 p.m. maalin kasta.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaJoni ErnstSteve KingnewsState Senator Randy FeenstraTheresa GreenfieldCOVID-19SomaliChad SheehanGeorge Floyd